သူတို့ဘက်ကကြည့်တော့ လူဆိုး … တို့ဘက်ကကြည့်တော့ သူရဲကောင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သူတို့ဘက်ကကြည့်တော့ လူဆိုး … တို့ဘက်ကကြည့်တော့ သူရဲကောင်း	Posted by mm thinker on February 10, 2015
Posted in: Politics.	Tagged: Politics.	Leaveacomment
-ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းများ လူထုထောက်ခံမှုရ၊ ဆက်လက်ချီတက်
-(အစိုးရအသံ) ကျောင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုရဲ့လား၊ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူရှိ
-TNLA က ဘိန်းခင်းတွေ ဝင်ရှင်း၊ တပ်နဲ့ ထိတွေ့မှုဖြစ်ဟုဆို
-(စစ်တပ်အသံ) TNLA က ဆက်ကြေးကောက်လို့ တိုက်ရပါသည်ဟုဆို
-ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ စာချုပ် တခုခုထိုးမယ်လို့ MPC က ခဏခဏ ထုတ်ရောင်း
-(တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ) စာရွက်ပေါ်က လက်မှတ် မလိုချင်၊ ရှင်းစရာရှိတာတွေ မရှင်းရသေးဘဲ လက်မှတ် အလွယ်တကူထိုးမည် မဟုတ်
-ဝှိုက်ကတ်နဲ့ ကျောင်းသားသပိတ် တိုက်ဆိုင်ပြီး လုပ်တာ မဟုတ်၊ သတ်သတ်စီလို့ ထင်ပါတယ်လို့ ဦးခင်ရီက ပြော
-ဖုန်ကြားရှင် ဝင်တိုက်တာနဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ကိစ္စတွေ ပါဝါဂိမ်းမို့ တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူးဟု မှူးဇော်ကဆို
ဒီဥပမာတွေကို စိစစ်လိုက်ရင် လက်တွေ့ကျတာက ဘယ်သူတွေဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့မကျနိုင်၊ ဖန်သားပြင်နဲ့ အိမ်ဆောက်ပြီး ခဲနဲ့အပေါက်ခံရကိန်းထွင်၊ ဝါးလုံးခေါင်းထဲက လကို ပစ်သွင်းချင်၊ အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်ချင်သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘယ်ဘက်ကလဲ ဆိုတာ အကဲခတ်ကြည့်လို့ ရတာပေါ့ …
← Bo Gyoke Portrait	Ko Moon Aung’s Songs and Lyrics →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Myanmar Sar	Blog Stats	254,992 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Blog at WordPress.com.